fucheketo 2795 days ago
serial 2795 days ago
Aakinchan 2794 days ago
fucheketo 2792 days ago
serial 2792 days ago
bairagiKancho 2792 days ago
Aakinchan 2791 days ago
fucheketo 2791 days ago
serial 2791 days ago
Aakinchan 2790 days ago
sanju.baba 2789 days ago
Mister 2788 days ago
fucheketo 2787 days ago
Aakinchan 2772 days ago
ThahaChaena 2700 days ago
gandharba 2700 days ago
koho-koho 2641 days ago
Visitor is reading Sending through Muncha
Visitor is reading Power Engineering Jobs
Visitor is reading English Expert..... help me out
[VIEWED 22481 TIMES]
Posted on 03-27-13 8:44 AM Reply [Subscribe]
म पात्रमा नायकत्व कति जरुरी छ ?मेरो कलमले अघि वढ्दा वढ्दै गहिरो प्रश्न राखेको थियो। म सोच्न वाध्य भएँ, किनकि यदि जरुरी छ भने जे म लेख्दैछु त्यो कथा होइन। ममा नायकत्व छैन।
कथा भन्दा थोरै अघि,
एयरपोर्ट डिलेभएका फ्लाइटको कारणले गर्दा हुनुपर्छ भिडभाँड थियो।आकृतिहरु दिमागमा छाप वनाउन नपाइ देखिँदै विलाउँदै थिए।भिँडभित्रका झुण्ड,उपझुण्डहरु कोहि रमाइरहेका थिए,कोहि गम्भिर देखिन्थे।गम्भिर हुनेहरु प्लेन डिले भएकाले हुनुपर्छ। मनमनै सोचेँ, किन आएँ आज एयरपोर्टमा चाँडो। म एक घण्टा अघि आएँ,फ्लाइट एक घण्टा डिले भयो । के गर्ने होला दुइ घण्टा? समय अचम्मको हुन्छ, जति खाली भयो त्यति गह्रुंगो हुन्छ!
"फ्लाइट डिले भो नि त केटी !"
उसलाई केटी भन्न मलाई रमाइलो लाग्छ।शुरु शुरुमा उ अचम्म मानेर हेरेकी थिई। तर पछि उसले मलाई र मैले दिएको विशेषण दुवैलाई अंगाली!
सुधालाई सुचना दिनु आवश्यक थियो । बेक्कारमा अतालिन्छे, मोवायल स्विच अफ भएको वेला पर्यो भने त झन् उसको होशले ठाउँ छोड्छ।तर आवश्यकतावोध भन्दा पनि मेरो लत भन्नुपर्छ, दुइ चार घण्टा ,दुइचार घण्टामा मोवायलका टेक्स्ट,फेसवुकका प्राइभेट म्यासेज वा कल जे वाट भएपनि मैले सुधासँग शव्द साटासाट गर्नुपर्छ। कहिलेकाहिँ जिस्किनुपर्छ , कहिलेकाहिँ ठूस्केकी उसलाई मनाउनु पर्छ। मलाई थाहा छ, उ रिसाएकी हुन्न तर पनि म उसलाई मनाइ टोपल्छु, किनकी मलाई थाहा छ मैले धेरै मेहेनत नगरी उ रमाउनेछे।
कहिलेकाहिँ म आफुलाई उसको नजरवाट हेर्न खोज्छु। मलाई थाहा छ, ममा औसत पुरुष भन्दा वढी केहि छैन।वरु कम होलान, केहि दुर्गुण होलान् । तर जव जव म आफुलाई उसको आँखावाट हेर्न खोज्छु, आफुमा स्वाभिमान देख्छु, एउटा अनौठो आकर्षण भएको व्यक्तित्व देख्छु , मन पगाल्न सक्ने पुरुषत्व देख्छु,खुशी हुन्छु अनि फेरि आफ्नो जीवनमैँ फर्किन्छु।कसैको जीवनमा आफ्नो उपस्थितिले पार्ने फरकमा रमाउनु नै माया होला शायद!
"किन र ?" उसको निन्याउरो आवाज फर्कियो। मोवायलमा निराशा चुहियो सुधाको!
"वेदरको प्रोव्लेम भने, तिमी सँग भेट हुन नदिने षड्यन्त्र गरे जस्तो लाग्यो !" मैले उसको निराशा हलुक्याउन खोजेँ!
"म त तँपाइ आउने होला भनेर अफिस छोडिदेँ आजको !" उसले हाँस्दै भनी ! उसले गुनासो पोखेको हुनुपर्छ उसको प्रतिक्षाप्रति।उसको म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने शव्द छनौट पनि अचम्मको छ। उ भन्दिन तर म उसले नभनेको वुझ्छु।जहाँ मौनता रमाइलो हुन्छ , त्यो पल शव्दहरु कुरुप हुन्छन् मौनताको सुन्दरताको अघि।
"कि कुद्दै आउँ त ?"
"अलि टाढै पर्छ होला, भो छोड्दिनु गल्नुहुन्छ!" उ खितित्त हाँसी । मलाई सन्तोक भयो।
"ल वेलुका सम्ममा आइपुग्छु, खास त्यहि भन्नलाई फोन गरेको । राखे है मैले! " मैले फोन काटेँ, यताउति हेरेँ कसैले सुनेका त छैनन् नि भनेर! अनि चुरोट कक्ष तिर लागेँ।
*************** ************** *************** ************* ***********
"तिमीले चुरोट खान अझै छोडेको छैनौ है ?" आवाज मधुरो थियो। अनि पुरानो पहिचान बोकेको पनि !
"आशा दिदी ! वाट ए प्लिजेन्ट सरप्राइज !" मैले भने पनि मलाई थाहा छैन यो भेट सुखद थियो वा थिएन, तर सरप्राइज भने अवश्य थियो।
"घर हिँडेको दिदी !"
"अल्लारेहरुको घर हुन्न नि आकाश , तिमीले नै भन्थ्यौ हैन र ?"
आशा दिदी थोरै मुस्कुराउनुभयो। मैले वहाँको अनुहार नियालेँ। पुरानो अनुहार भन्दा पृथक केहि थिएन। करिव एक वर्ष भयो होला भेट नभएको ! परिवर्तन खासै थिएन। अझै पनि उसरी नै मुस्कुराउनु हुन्थ्यो । अझै पनि गहिरा शव्दहरुमा जिस्किनुहुन्थ्यो। परिवर्तन त ममा थियो। किन एउटै आकाशका दुइ पाटामा घामले फरक फरक असर गर्छ ?
"मान्छे सँधै अल्लारे रहँदैन नि त दिदी !" म पनि वहाँको मुस्कानको साथ दिँदै मुस्कुराएँ।घर शव्द मात्र होइन।घर भौतारिनेको लागि स्थिरता हो। घर वाँध हो,परखाल हो अनि दुइ मुटु जोड्ने पुल पनि।
"विहे गर्यौ कि के हो ?" वहाँले आश्चर्य मान्नुभयो ! आश्चर्य मानेकोमा मलाई आश्चर्य भएन, छवि नै त्यस्तै वनाएको छु मैले। छाप नै त्यस्तै छोडेको छु मैले! म जे देखाउन चाहन्छु, संसारले त्यहि न देख्छ। रंगहरु त मैले छान्ने हो मेरो इन्द्रेणीको। कुन गाढा हुन्छ, कुन फिक्का हुन्छ त्यो त मेरो क्यान्भास कोराइमा फरक पर्छ।
"अचम्म छ, तर खुशी लाग्यो ! "
वुद्द एयरवाट पोखरा जाने विमानमा पाल्नु हुने यात्री महानुभावहरु कृपया गेट ए तर्फ प्रस्थान गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ!
सँधै झै सुमधुर आवाजमा एउटी युवतिको ध्वनि गुन्जियो!
"ल म लागेँ, यु मेड अ गुड डिसिजन फाइनल्लि !" आशा दिदीले आफ्नो व्याग उठाउनु भयो !
"दिदी तँपाइले मलाई परिवर्तन गरिछाड्नु भयो, हुन त मैले माफि माग्न नमिल्ने हो !तर गर्न सक्नुहुन्छ भने तँपाइले मलाई माफ गर्नुहोला !" वोल्न गाह्रो भएको थियो! तर वोले पछि हलुका भयो मनवाट भार हटे जस्तो!
"कमअन! इट्स ओके! मान्छे पल पल फरक हुन्छ! त्यो तिम्रो हैन पलको दोष थियो !" मेरो दुइ काँधमा हात राख्दै जवाफ आयो आशा दिदीको !
विस्तारै भिँडमा आशा दिदि हराउनु भयो। मेरो दुइ घण्टा अव खाली छैन! त्यसमा अतितले समय पाएको छ!
Posted on 03-30-13 8:05 AM [Snapshot: 903] Reply [Subscribe]
Buzz and Smaran- yup She came Finally,.....
अर्को भाग अघी वढाउने अनुमति चाहन्छु
आशा मात्र दृष्टीको दिदी हो नि ! मेरो मनमा उठेको पहिलो सोच थियो।कथा त्यहि समयको त्यो सम्वन्धवाट डोरिइनु परेकोले अहिले दिदी शव्दलाई म थोरै विश्राम दिँदैछु।कथामा शव्द शव्दका अर्थ हुन्छन् दिदी शव्द जवसम्म प्रयोग हुन्छ तवसम्म मेरो मनको भार हट्नछैन। म कथा सुनाउन सक्ने छैन।जीवनका घुम्तिहरुमा उ पनि कुनै सम्वन्धको भार नवोकी छिरेकी थिई। सारांशमा कथाको त्यो मोडमा उ मात्र आशा थिई।
म साँझमा छतमा थिएँ।विराटनगर पहिलेको जस्तो थिएन।हामी शहरको एक कुना जस्तोमा नै भए पनि पर परसम्म खेत देखिन्नथ्यो।घाम घरहरुको विचवाट अस्ताउँदै थियो।प्रकाश गुलावी थियो।लामखुट्टेको गुनगुन वढ्न थालेको थियो।म भने शुन्य प्राय भएर आफुले नै उडाएको धुवाँलाई नियाल्दै थिएँ।संसारले मलाई दुई चरित्रको व्यक्ति मान्न सक्छ,किनकी म घरमा पृथक हुन्छु वाहिर भन्दा! कहिलेकाहिँ सोच्छु "म मेरि माया गर्ने आमालाई किन कुरा लुकाउँछु ?" उत्तर पाउँदिन । खोज्न छोडिदिन्छु। म दुई चरित्रमै ठिक छु। यसलाई सामाजिक भाषामा मान्छे प्र्याक्टिकल भएको भन्छन्।
आशा पनि एकान्त खोज्दै हुन सक्छ छतवाट उक्लिएको मैले देखेँ।मैले हत्तपत्त सल्किएको चुरोट निभाएँ।म चाहन्न मैले समाजको अघी ठड्याएको अर्को मको स्वरुप झर्यामझुरुम होस् एउटा चुरोटले।
"विहेको माहौल मन पर्दैन हो ?" उसले नै कुराको शुरुवात गरी!
"किन र?" मैले अचम्म माने जस्तो गरेँ।
"एक्लै छतमा किन त ?"
"मलाई भिँडभाँड मन पर्दैन खासै!"
"त्यो भनेकै पहिलो प्रश्न हैन र ? विहेको माहौल भिँडभाँड !" उसको मुस्कानमा धेरै रंगहरु थिए।केहि अस्पष्ट आकृति थीए। सरल पक्कै पनि थिएन उसको मुस्कान।
"कैद कसलाई मन पर्छ र ? त्यसमाथी जन्मकैद !" मैले सपाट उत्तर फर्काएँ।
"कैद किन र?"
"विहे भनेको सिमा तोकेको त हो नी ! मान्छे त स्वच्छन्द हुनुपर्छ ! पखेटा फिँजाउनुपर्छ,उड्नुपर्छ!"
"केहि सम्वन्धहरु आकार नपाउन्जेल छताछुल्ल हुन्छन्,पोखिन्छन! वोक्ने भाँडो चाहिन्छ !"
"छताछुल्ल भएर त यात्रा तय गरिन्छ ,आकार त स्थिर हुन्छ !" मैले उसलाई नियाल्दै जवाफ फर्काएँ। एउटा गम्भिर भेष ! उसले मलाई तानेकी थिई। कुर्ताको टप ,जिन्स प्यान्ट अधवैँशे अनुहार ! करिव म भन्दा पाँच छ वर्ष जेठी हुनुपर्छ उ! अहिलेसम्म का केटीहरु भन्दा पृथक। अहिलेसम्म मेरो वरालिने मनले वरालिने मनलाई नै भेटिरहेको थियो।खहरेहरु रातका भेल वोकी आउँथे,दिनको प्रकाशमा उनीहरु सुके जस्ता हुन्थेँ, तिर्खा जस्ता को तस्तै,यात्रा जस्ताको तस्तै !दिन फेरि अर्को खोजमा वित्थ्यो। एउटा स्थिर समुन्द्रले मेरो मनमा पौडि खेल्ने गरीको काउँकुति लगाएको नै थियो त? जहाँ गहिराई थाहा हुन्न,त्यहाँ डुव्नुको मजा नै वेग्लै!
"कहिलेकाहिँ गति हानीकारक हुन्छ,विशेषत लक्षको उल्टो हिँडियो भने !"
"लक्ष थाहा नपाइकन पक्डेको गतिको फेरि अलग्गै नशा हुन्छ !"
"आ-आफ्नो सोचाइ हो !" उसले थोरै भुइँमा झुक्दै जवाफ फर्काई।
"तँपाइको सोचाइ के हो त ?" मैले तँपाई नै भनेर सम्वोधन गरेँ। तिमीमा झर्ने मैले हालसम्म अनुमति पाएको छैन। अनि उ म भन्दा जेठी नै पनि थिई।
"कहिलेकाहिँ उत्तर नहुने प्रश्नहरुले पिरोल्छन् ! म तल झरेँ ल, पछि कुरा गरौँला ! तिमी साह्रै रमाइलो कुरा गर्छौ! अनि नडराए हुन्छ,म चुरोटको लतको वारेमा कसैलाई भन्नेछैन! ह्याप्पी स्मोकिंग एण्ड सरी टु वदर यु !"
उ हाँसी , केहि त छ उसको अनुहारमा ! त्यो पिडा हुनुपर्छ! हाँसोमा मिसिएर एउटा अनौठो रंग वनाउँछ अनुहारमा ! एउटा रहस्य पोत्छ क्यानभासमा !
********* ********** ********* ********** ********* ********* ************
"तेरो आशा दिदी वस्ने चाहिँ कहाँ हो?" मैले दृष्टीलाई प्रश्न राखेको थिएँ हामी दुइजना मात्रै हुँदा। आमा मैले केटी मान्छेको चासो लिएको राम्रो मान्नुहुन्न। फेरि आशा त आइमाइ थिइ होला आमाको नजरमा, म भन्दा जेठी हुनाले!
"तेरो पनि दिदी नै हो, जेठी हो धेरै !" मनमा चस्स विझ्यो। किन दिदी भन्नु ? जेठी भन्दे त भइगो नी !
"घर कहाँ हो वहाँको ?" मैले प्रश्न गर्न छोडिन।
"कुलेश्वर तिर होला वसाइ !" उसको उत्तरमा सोधे भन्दा वढी केही आएन। सामान्यतय केटी मान्छेहरुलाई एउटा प्रश्न गरेपछि उधार्न सजिलो हुन्छ। तर दृष्टी अपवाद निस्किई, उसले उसलाई थाहा भएका धेरै कुरा लुकाए जस्तो लाग्यो। के उसले मेरो आशय वुझि त मनमा डर लागेर आयो। यहाँ मलाई समाजको पनि त डर छ।
"को को वस्छ र सँगै ?" मनमनैँ सोचेँ जे सुकै सोचोस् दृष्टीले !मैले के नै गरेको छु र अहिलेसम्म !
"वुढाले छोडेपछी,वसाई एक्लै छ !"
मन एक तमासको भो !उसको गम्भिर अनुहार अनि छतको वार्ता सम्झेँ "कहिलेकाहीँ उत्तर नभएका प्रश्नहरुले पिरोल्छन् !" त्यसो भए आशाले उत्तर नभएका प्रश्न कोट्याइ नै किन त ? उसलाई थाहा थियो त्यो प्रश्न आउँछ , उ सँग उत्तर हुने छैन भन्ने। आखिर मेरो अघि निरुत्तर हुने रहर किन ? शायद उसले मलाई जाँच्न चाहेकी थीई, उसको रहस्यमा मेरो जिग्यासा कति भन्ने ! जव मान्छे सम्वन्धसँग वाक्क हुन्छ , उसले एकान्त खोज्छ तर सम्वन्ध र एकान्त दुवै सँग वाक्क भएको मान्छेले म जस्तो साथी खोज्छ। शायद आशाको खोज ममा आएर टुंगेको थियो। मन फुरुंग भयो, म फेरि धैर्यवान भएको छु, सहि समयको खोजीमा !
Posted on 03-30-13 9:40 AM [Snapshot: 935] Reply [Subscribe]
दुइ भाग नै पढी भ्याएँ
एकदम घच्ची को कथा गैरहेको छ - अर्को भाग को प्रतीक्षा मा
Posted on 03-31-13 10:58 AM [Snapshot: 1092] Reply [Subscribe]
घचा घच २ भाग आएछ ... एकै सासमा पढेर सिधाये ... कस्तो उत्कृस्ट प्रस्तुति ...
keep flowing bro...
Posted on 04-02-13 12:48 PM [Snapshot: 1281] Reply [Subscribe]
Serial/Akinchan- thank you very much, यसपालीको पोस्टिंगमा ढिलो भएको कमेन्ट अहिले सम्म आएको छैन खुशी लागेको छ। hahahahaa>>
आशा सुन्दर थिई। तर सुन्दरता पारख सँग मिसियो भने त्यो अद्दितिय हुन्छ। उ अद्दितिय थिई किनकी उ पारखी थिई।एउटा अनौठो मैले नचाखेको स्वाद थिई। भोगि म उ तिर डोरिएको थिएँ। उसका रहस्यमयी शव्दहरुको मैले सुन्दर अर्थ निकालेको थिएँ।
"एक्लै त कता जानु ठूलो मामु ! फेरि मलाई विराटनगरको खासै थाहा पनि छैन" उसले म तिर हेर्दै भनी । उ स्कुटी स्टार्ट गरेर साथी खोज्दैथिई दृष्टी विहाको डेकोरेसनको सामान लिन जानलाई।
"म जाउँ त आण्टी ?" मैले उसको इशाराको अर्थ निकालेँ। उ मेरो साथ चाहन्छे।
"जा न त ! त्यो केदारको दोकान देखाइदे !"
म सिँढीवाट फटाफट झरेँ। अनि स्कुटी को नजिकै पुगेँ।
"आज म तँपाइको साथी !" भन्दैगर्दा मनमा अनौठो काउँकुति लागेर आयो। किन म उसलाई अझै तिमी भन्न सक्दिन?
"पछाडी वसेर लडिएला, म खासै राम्रो कुदाउँदिन !" उ मुस्कुराई।
"म कस्सिएर पक्डिन्छु नि !" उसको कम्मर नियालेको मात्र के थिएँ, उत्तर फुर्न वेर लागेन।
उ खित्का छोडेर हाँसी पहिलो चोटी।सदा जस्तै पहिलो चाल सोचेको ठाउँमा वस्यो मेरो!
************* ******************* ************** *************** *********
"बर्ब्रेरी ब्रिट ,फ्रेन्च , एण्ड आइ लभ द स्मेल !"
मैले स्कुटीवाट झर्दै गर्दा उसको छनौटको तारिफ गरेँ। हुन पनि स्कुटीमा वसुन्जेल उसको सुवाष मात्र घुम्यो,उसको हेलमेटवाट वाहिर निस्किएर पनि मेरो अनुहार छुन भ्याएका उसको कपालले मलाई अरुतिर हेर्न पनि दिएन।त्यो कालो वादल थियो जसले आकाशको आकाश छेकेको थियो।
"वाउ, आइ एम इम्प्रेस्ड!" उसले अचम्म मान्दै मलाई हेर्दै भनी।
प्रत्येक शिकारका प्रकार हुन्छन। काहिँ वलियोको अघि वलियो वनिनुपर्छ। कहिलेकाहिँ निर्धोको मुखौटो लगाउनुपर्छ। हो उ अभ्यस्त भइसकेकी थिई पुरुषत्वसँग । त्यसैले मैले कलिलो केटो देखिनु उचित ठानिन। मैले उसलाई मेरो संगत धेरै उ जस्ताहरुसँग भइसकेको छ भनेर देखाउनु नै मेरो लागि श्रेयस्कर थियो।
"तिमीलाई पर्फ्युमको वारेमा धेरै थाहा छ जस्तो छ !"
"लगाउनेहरुसँग संगत छ !" म हाँसे। उसले मलाई घोरिएर हेरी।मैले त्यो रहस्यमयि नजरको अर्थ लगाउन सकिन। लाग्यो जीवन जटिल भएर नै होला सुन्दर छ।
********* ******** ********* ********* *********** ********* ******* *****
"तिमी फरक छौ , केहि न केहि त फरक छौ !" उसले धेरैवेर मेरो कुरा सुनेपछि मलाई भनी।काम सिध्याएर हामी चिया पिउनलाई "आँगन"मा छिरेका थियौँ।म जानीवुझि कुनाको कुर्सीमा गएर वसेँ।
"फरक भएर न मान्छे म हुन्छ ! नत्र त म पनि भिँडभित्र हुन्छ, खोज्नुपर्छ!"
"अनि काठमाण्डौमा कहाँ हो घर ?पुगेर पनि भेट्नुपर्छ वुझ्यौ ?"
"मलाई त वानी लागेपछि छुटाउन गाह्रो हुन्छ !"
"मैले भेट्ने वानी भनेको !"
"भेट्ने पनि वानी हुन्छ कहिँ ?"
"हुन्छ त !" म हाँसे।उ पनि हाँसी। चियाको चुस्कि नै गुलियो भयो।
"तँपाइ हाँसेको मलाई खुव मन पर्छ ,एकदम गहिरो !"
"तिमी जसलाई पनि हँसाउन सक्छौ!" उसले मेरो तारिफ गरी । म शव्दहरु वुन्दै गएँ किनकी मलाई पनि त शव्दको जालो वनाउनु थियो।
********* ********* ************** ************* ********** **************
"जाने हैन त,अव घर ?"
त्यहाँ खासै भीँड थिएन।फाट्ट फुट्ट मान्छे अनि कुनामा हामी ! आशाको उपस्थितिले गर्दा हुन सक्छ मैले वाहिर नियाल्न पनि भ्याएको थिइन। उसको घाँटीमा गरिएको पुतलिको ट्याटु मैले स्कुटरमा हुँदा देखेको थिएँ। मलाई अचम्म लागेको थियो। उसले समाज सँग लुकाएकी होला ट्याटुलाई आफ्नो लामो कपालले।दृश्यहरु सहि गलत हुँदैनन्, मात्र समाजको नजरमा पाच्य र अपाच्य हुन्छन् मैले त्यहि निष्कर्ष निकालेको थिएँ।
"हेलो, कता हराएको ?ढिलो भएन भन्या ?" उसले फेरि पनि जिद्दी गरी ।
"वसौँ न!एक छिन, अनि फेरि अल्लारेको कुनै घर हुँदैन! कुन घरलाई पो आफ्नो भनौँ ?" म हाँसे।
"आफुलाई अल्लारे वनाउने कत्रो धोको !" उ हाँसी
"मैले भनी सकेँ नी, मलाई स्वतन्त्रता मन पर्छ !"
"ओ यस, साँची , चुरोट खान्नौ आज ?" उसले मलाई जिस्क्याई
"मनमा धेरै धुवाँ भएको वेला म चुरोट पिउँदिन !"
"फिलोसफिकल, अगेन ! कहिले काहिँ म तिम्रो कुरा वुझ्दिन !"
"एउटा कुरा सोधौँ ?" मलाई गोलघुम्ति घुमिरहन मन छैन । उ मेरो यति नजिक छे, उसको सुवाष अझै व्याप्त छ ।मैले आफ्नो धैर्यताको धेरै परिक्षा लिइरहनु उचित हुन्न।
"सोध न !"
"माया ठूलो कि आवश्यकता ?"
"मैले त माया भेट्टाएको छैन, मात्र भ्रम भेट्टाएको छु !"
"त्यसो भए आवश्यकता?"
"हुन सक्छ !" उ गम्भिर भएर मलाई हेरीरही !
"त्यसो भए तिमी मलाई आवश्यक छौ !"
मैले उसको हात समाउँदै भनेँ। पहिलो चोटी तिमी भने, लाग्यो म सँग अव तिमी भन्ने हक छ।
Posted on 04-02-13 1:10 PM [Snapshot: 1302] Reply [Subscribe]
यो भाग पनि राम्रो गयो
फुच्चे संग सिक्नु पर्ला जस्तो छ कसरी केटि पत्याउने भनेर
Posted on 04-02-13 1:11 PM [Snapshot: 1312] Reply [Subscribe]
लाइक मा क्लिक हान्न खोजेको फल्याग मा परेछ
Posted on 04-02-13 1:31 PM [Snapshot: 1322] Reply [Subscribe]
hahahahhhaha...serial its ok...unless it reaches5i m safe no??
Posted on 04-02-13 1:38 PM [Snapshot: 1337] Reply [Subscribe]
१० हो क्यारे - फेरि लाइक मा थिच्न खोजेको - दिएन
Posted on 04-02-13 3:39 PM [Snapshot: 1409] Reply [Subscribe]
write i book. i would definitely buy it. hats off to you broda..
Posted on 04-03-13 5:25 AM [Snapshot: 1561] Reply [Subscribe]
<<< दृश्यहरु सहि गलत हुँदैनन्, मात्र समाजको नजरमा पाच्य र अपाच्य हुन्छन् >>>
हो नि एकदमै सहि कुरा हो
<<< लाग्यो जीवन जटिल भएर नै होला सुन्दर छ >>>
होला प्रभो मलाई पनि तेस्तै लाग्न थालेको छ :)
<<< "माया ठूलो कि आवश्यकता ?" >>>
प्रभो लाइ नै थाहा होला यो कुरा त :P
कहिले कहिँ त अचम्मै हुन्छ ... येति छिटो पनि आउदो रैछ त नया भाग... संधै येस्तै जाँगरिलो भए हामीलाई कति रमाइलो हुन्थ्यो होला
Posted on 04-03-13 12:14 PM [Snapshot: 1660] Reply [Subscribe]
Bairagikanchho- In fact I am writing one :) will let you know once its published.
Akinchan- thank you..again another part in rapid fire :)
कहिलेकाहिँ एउटा प्रश्नले पिरोल्छ मलाई "वुद्द कसरी वुद्द वने ?" एउटा रुखको फेदमा वसेर उँघ्दा मात्रै त कसरी पो वुद्दत्व प्राप्त हुँदो हो?घर परिवार आवश्यक छ भनीन्छ, अनि मोह माया सँग दाँजिन्छ पनि ! यदि स्वतन्त्र हुनु वुद्दत्व प्राप्त गर्नु हो भने त म पनि अर्कै मानेमा स्वतन्त्र नै छु नि। सत्यवोध मलाई पनि छ। तर निष्कर्षहरु शास्वत हुँदैनन् । कथाले दृश्य फेर्छ, जसलाई साँचो मानेर मैले तँपाइलाई कथाको आधा पाटो भन्दा वढी डोर्याइसकेको छु त्यो सत्य थिएन भन्ने कुराको ग्यान मलाई त्यो दिन भयो।
म एकचोटी अँध्यारो वाट उज्यालोमा निस्किँदा प्रकाश सह्य नभएर तिरमिराएको थिएँ। आशाको जवाफ सोचेभन्दा पृथक, मेरो निम्ति कष्टकर थियो।उसले जोडले मेरो गालामा थपड हानेपछि,मैले वरीपरि हेरेका थिएँ। क्यासमा वसेको केटो वाहेक अरुले त्यो देखेनन्, मेरो सौभाग्य नै भन्नुपर्छ।आखिर फेरि सत्य त्यहिँ गएर अडियो "ग्लानी त्यहाँ हुन्छ जहाँ कसैको नजरमा गिरिन्छ, हेर्ने नजर नै नहुँदो हो त ग्लानी पनि नहुँदो हो !"
उ खुरुखुरु गएर दुइ जनाको चियाको पैसा तिरेर वाहिर निस्किई। मैले त्यति खेर आफुलाई नियालेर आफ्नो धरातल खोज्ने प्रयास गरेँ। समय शुन्य थियो।
"म गलत थिएँ, तिमीलाई फरक ठाने,कोहि पुरुष फरक हुन्नन् ! तिमी पनि फरक रहेनछौ !" कानमा शव्दहरु अझै गुन्जिरहेका थिए। मैले विस्तारै छरपष्टिएको मनलाई वटुलेँ अनि वाहिर निस्किएँ। अचम्म उ मलाई पर्खिरहेकी थिई।
"मलाई थाहा छ, मैले छोड्नुपर्ने हो अनि एक्लै जानुपर्ने हो ! तर म फेरि चर्चाको विषय किन वनौँ? अहिलेसम्म त वन्दै आएकी छु ! समाजकै आँखाले त होला तिमीले पनि हेरेको ! "
म नाजवाफ थिएँ । के उत्तर दिउँ उसलाई?
"म अरु जस्तो केटो होइन, म त प्रत्येक दिन स्वाद फरक चाहन्छु त्यहि भएर न हो ! " भनौँ "सरी " भनौँ? मैले चुप लाग्न नै उत्तम ठानेँ। शव्दका लागि त समयको समुन्द्र नै वाँकी छ। विराटनगर साँझ नै भए पनि तापिलो थियो ।गर्मीले उग्र थियो।
"वस !" उसले मलाई स्कुटरमा वस्न भनी ! म स्कुले केटा जस्तो चुपचाप वसेँ , उसलाई छोइएला जस्तो गरेर। वरवेरी को सुगन्ध टाढावाट अहिले पनि आइरहेको थियो। तर मेरो ध्यान तान्ने अरु नै केहि थियो। म हराएको थिएँ। हो पराजयले शिक्षा दिन्छ, यसपाली को पराजय वास्तवमा पराजय थियो वा थिएन थाहा छैन तर त्यसमा शिक्षा अवश्य थियो।जीवन के हो ?आखिर सत्यवोध नै त हो !
************ ************ ********* ************** ************ **********
"कता हराउँछस् हँ त ?" आमा छिर्दा म झसंग भएँ। हिजोको घटना अझै ताजै थियो। भनौँ छापिएको थियो।पहिलो चोटी मैले वुझेँ "नारी वुझ्न कठिन हैन असम्भव छ !" अनी दोश्रो वुझाईँ मा मैले वुझाईँ फेरेँ" आखिर म त लगाम लगाएका घोडा न थिएँ, म मात्र अंगहरु देख्थेँ , अनि तिनलाई छिचोल्ने वाटाहरु। तर समवेदना त सरल कहाँ हुन्छ र ?जटिल नै हुन्छ ! खहरेमा त एकैचोटीको डुवुल्कीमा ढुंगा छुन सकिन्छ समुन्द्र त मोति लिएर वसेको हुन्छ, त्यहि भएर गहिराई जटिल हुन्छ। आंशिक ग्यान अनि फुस्रा पलहरुले मोति टिप्न सकिन्न। मोति टिप्न समुन्द्रलाई वुझ्नु पर्छ।
"हैन टाउको दुखेको छ आमा !" मैले आफुलाई लुकाएँ।
"हिजो दिनभर थिइनस् नि !"
"त्यहि दृष्टीको डेकोरेसन को सामान लिन गएको थिएँ!" आमा किन घाउ कोट्याइदिनुहुन्छ!मलाई पोल्दैछ। जति छुनुहुन्छ , मलाई चर्याउनेछ। म एकान्त चाहन्छु , मलाई चिच्याउन मन लाग्यो, सकिन। फेरि निशव्द भएँ।
"सामान त तिन वजे नै आयो! वावु एउटा कुरा भन्छु नरिसा ल!"
"भन्नु न !" मलाई कौतुहलता जाग्यो।
"मैले धेरै पहिला देखी चिन्छु आशालाई , उ राम्री केटी होइन ! संगत धेरै केटाहरु सँग छ! अलि टाढै वस!"
मैले आमाको आँखामा हेरेँ। चुप नै वसेँ । के भनौँ र खोई।
"तँ सोझो छस् ! उसको केटा खोज्ने वानीले चाँडै विहे गर्दैका ! घर खान पनि सकिन ! अहिले पनि चर्ने रहर होला उसको ! केटामान्छे कतिखेर फस्छन् थाहै हुन्न , केटा विगार्ने आइमाई ले नै हो !"
मलाई आफु देखि घिन लाग्दै आयो। आमामा मैले समाज देखेँ।हो समाजको हेर्ने आँखा फरक छ। पुरुषको पुरुषत्व हुन्छ, आइमाई त कि पतिव्रता हुन्छन् कि वेश्या हुन्छन्।
"आमा भयो त वुझेँ मैले कुरा !" म थोरै झर्किएँ।
"अरु मलाई थाहा छैन, आशा सँग टाढै वस् !" आमा कठोर वन्नु भयो। कसरी भनौँ म आमालाई समाजको चश्मा दोषी छ भनेर !!
Posted on 04-03-13 12:40 PM [Snapshot: 1674] Reply [Subscribe]
>>>आमामा मैले समाज देखेँ।हो समाजको हेर्ने आँखा फरक छ। पुरुषको पुरुषत्व हुन्छ, आइमाई त कि पतिव्रता हुन्छन् कि वेश्या हुन्छन्।
गज्जब को लेखाइ फुच्चे - फुच्चे को लेखाइ को तारिफ गर्नु भनेको सुर्य को अगाडी दियो देखाउनु बाहेक अरु नहोला भन्ने मान्या छु
Posted on 04-05-13 12:02 AM [Snapshot: 1905] Reply [Subscribe]
<<< "ग्लानी त्यहाँ हुन्छ जहाँ कसैको नजरमा गिरिन्छ, हेर्ने नजर नै नहुँदो हो त ग्लानी पनि नहुँदो हो ! >>>
वा कस्तो सत्य मिठो पारामा लेख्नु भो
<<< पराजयले शिक्षा दिन्छ, यसपाली को पराजय वास्तवमा पराजय थियो वा थिएन थाहा छैन तर त्यसमा शिक्षा अवश्य थियो >>>
हो प्रभो हो ... मैले पनि धेरै शिक्षा यसरीनै पाएको छु, मन नै छोयो
<<< आमामा मैले समाज देखेँ।हो समाजको हेर्ने आँखा फरक छ। पुरुषको पुरुषत्व हुन्छ, आइमाई त कि पतिव्रता हुन्छन् कि वेश्या हुन्छन्। >>>
अनि बुक कहिले आउछ बजारमा खबर पाम है ....संधै यस्तै rapid fire जाओस धेरै कुर्न नपरोस ...
Posted on 04-05-13 4:02 PM [Snapshot: 2005] Reply [Subscribe]
Gajjab raichha...sarai mitho prastuti!
Posted on 04-06-13 6:33 PM [Snapshot: 2160] Reply [Subscribe]
ek chot mai6otai bhaag padhen! darro lekhnu hundo raichha! arko bhaag kaile ho? waiting!
Posted on 04-07-13 6:57 AM [Snapshot: 2253] Reply [Subscribe]
Serial, sanjubaba, mister- Thank you very much
akinchan- thank you, I ll try my best not to disappoint u
अन्य पढिदिनुहुने सवैलाई धन्यवाद
लेख्नेहरुको भाव समान नै भए पनि वुझ्नेहरुको मन फरक मात्रै हुँदा पनि कथा फरक हुन्छ। आशयले कोल्टे फेर्छन पाठकको मन अनुसारले। ढल्किन कर नै लाग्छ किनकी पढिदिने त उनीहरु नै हो। आफुलाई जत्ति नै खुला ह्रदयको छु भनिठाने पनि प्रत्येक व्यक्ति समाजको कोकुन भित्र छिर्छ। भिँडमा हराउँछ , किनकी लुक्नु मानवको स्वभावमा छ।
म एक किसिमले दोधारमा परेको थिएँ। मैले आशा सँगको साथवाट जे भोगेँ , जे ग्यान लिएँ त्यो मैले आमालाई सुनाएर आफुलाई दोषी देखाएँ भने आशाको छवी सुध्रिन्छ?तर फेरी सोचेँ त्यो चश्मा लगाएर समाजले आशालाई मात्र क्षणिक उन्मुक्ति दिन्छ। उसलाई फेरि माया गाँस्ने स्वतन्त्रता दिनेछैन! उसका कुरा काट्न रोकिने छैनन्! अनि म जस्तै उसलाई फेरि पनि शिकार सम्झिनेहरु अनुहार वदलिएर आइरहनेछन्। आशा खुशी देखिएकी थिई किनकी उसले लड्न सिकी सकेकी छे, अरु संग अनि एकान्तमा आफूसँग।
म किन त्यति लाचार वनेँ त ?प्रश्नको जवाफ छैन, मैले कथाको शुरुमै भनेको छु , ममा नायकत्व छैन। मैले औसत नै रहने सोच वनाएँ।कसैलाई केहि भनिन, मनमा कुरा गुम्सिरह्यो।
************* *********** ************ ************ ************** *******
"सुधा , के गर्दैछौ ?" मैले फेरि सुधालाई फोन गरेँ। मेरो वर्तमानको मिठो प्रहर सुधा नै त हो।
"पर्खिराखेको छु !"
"वोर्ड हुने वेला भो, अव चाहिँ उड्छ होला !" मैले सुस्तरी जवाफ फर्काए
"आवाजमा खुशी छैन त मिस्टर, एयरपोर्टमैँ वस्ने मन थियो कि के हो?"
"मन त अघी घर पुगिसक्यो , म मात्रै एयरपोर्टमा हो अहिले त !"
आजकल म शव्दहरु मात्र सुधाका लागि प्रयोग गर्छु। म झन माझिएको छु। शव्दहरु पनि अर्थ पाएर खुशी भए जस्तै लाग्छ।
"चेपारे! म एक छिन वजार जान्छु त्यसोभए !"
मलाई थाहा छ । उ मलाई मन पर्ने तरकारी को व्यवस्था गर्नलाई निक्लिन लागेकी हो ! परिवर्तन त्यहाँ हुन्छ, जहाँ रहर हुन्छ ,अनि लक्ष हुन्छ। मलाई अर्को परिवर्तन को कुनै रहर छैन।
म फर्किएको थिएँ वर्तमानको उडानमा । एउटा अनौठो अतित आशा दिदीले सम्झाएर जानुभयो तर मन आज हलुका भएको थियो। मैले त्यतिखेर विदा नमागिकन नै हिँडे पनि, आज समयले मौका दिएको थियो।म उठेर वोर्डिंगको लागि छिरेँ। आशा दिदी एरोप्लेनमा हुन्जेलसम्म मलाई झक्झक्याइरहिन । मेरो समय मौनवन्यो, अतितको सम्झनामा। ध्यान वर्तमानमा ल्याउन मलाई निकै अफ्ठ्यारो पर्यो।तर थाहा नै नपाइ आशा कसरी आशा दिदी बनिन् मलाई पत्तो भएन।
(सवै आशा दिदीहरु प्रति हाम्रो दोषी आँखाको लागि माफि माग्दै समर्पित)
Last edited: 07-Apr-13 06:58 AM
Posted on 04-22-13 5:50 AM [Snapshot: 2677] Reply [Subscribe]
परिवर्तन त्यहाँ हुन्छ, जहाँ रहर हुन्छ ,अनि लक्ष हुन्छ। मलाई अर्को परिवर्तन को कुनै रहर छैन
कस्तो मिठो लेखाई, फेरी पनि लेख्दै जाम है ... पढ्ने त हामी छदै छौ नि
Posted on 07-03-13 2:00 PM [Snapshot: 3231] Reply [Subscribe]
फुच्चे साथि, धेरै पछि फेरी एक देखि सात सम्मै पढे.....हजुरको शब्द शब्द को बयान गर्न मसंग सत्ते शब्द छैन.... कसरि लेख्न सक्नु हुन्छ अचम्म लाग्छ.....
Posted on 07-03-13 10:43 PM [Snapshot: 3377] Reply [Subscribe]
This is the best writing I have read in Sajha.
I'm out of words to describe how good it was.
Although I haven't met Aasa Didi yet, it is probably in Ritus that I can relate myself.
Posted on 08-31-13 2:12 PM [Snapshot: 3739] Reply [Subscribe]
Bro saw your Story Asha Didi in setopati..
Can't help without sharing again, with sajhaist...